कार द्वारा (beh) क्षेत्र संख्या २277. प्रमुख यो क्षेत्र के हो? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कार द्वारा (beh) क्षेत्र संख्या २277. प्रमुख यो क्षेत्र के हो?
तिनीहरू भन्छन् कि विचारहरू भौतिक हुन्छन्। हुनसक्छ यो मामला त्यस्तै हो। त्यसोभए सुरुमा नम्बर फिल्ममा देखा पर्‍यो र त्यसपछि एउटा लेख मस्को कोम्समोलेट्समा प्रकाशित भयो। तर स्पष्टतः एक नम्बर २ 277 पर्याप्त थिएन र मस्कोले पनि २ 299 number नम्बर प्रविष्ट गर्ने निर्णय गर्यो।
धेरै डबल-अंक संख्या क्षेत्रहरू विकसित भएका छन् वा उनीहरूका श्रोतहरू विकास गर्दैछन्। शुद्ध गणितमा, उनीहरूसँग निरन्तर जीवनको कुनै सम्भावना छैन। तीन-अंक आइकनमा संक्रमण अपरिहार्य छ र पहिले नै छ।
२277 औं मस्को क्षेत्र (मस्को क्षेत्र) को प्रभारी हुनेछ।
बेड़ेमा वृद्धि अझै छ र ती समायोजनहरू लेराउँदछन्।
समय बित्दै गइरहेको छ, त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै कारहरू छन्, विशेष गरी हाम्रो मातृभूमि को राजधानी को रूप मा यस्तो धनी शहर मास्को, र त्यहाँ पर्याप्त संख्या छैन, ती मात्र तीन-अ ones्कको हो कि।
त्यसो भए, क्षेत्रहरूको नयाँ पदनामहरू अगाडि नम्बर १ थपेर परिचय गराइन्छ, तर तिनीहरू पहिले नै पर्याप्त छैनन् - २1 देखा पर्यो।
277 मस्को हो। 77 177 जस्तै, १XNUMX जस्तो।
खैर, यो स्पष्ट छ कि मस्को निहित थियो, यद्यपि यो कीवमा चित्रित गरिएको थियो। त्यहाँ अरु धेरै धेरै महँगो क्लबहरू कहाँ छन् मजरहरूको लागि? अफिसमा मस्कोको नक्शा झुण्डियो। मस्कोको दृश्यहरू देखाइएको थियो (मस्को शहर बिजनेस सेन्टर, पाभलेस्काया स्क्वायर नजिकको भवन, क्र्यालत्स्कोयीको पुल ... जस्तो कि मस्कोमा त्यहाँ कुनै आकर्षण थिएन जुन त्यहि कुरा देखायो, तर ओह राम्रो ...) तसर्थ, ठगको संख्या मस्को क्षेत्रमा सम्बन्धित छ। हालसालै यो थाहा भयो कि चाँडै नै, र सत्य हो, त्यहाँ २ code277 को क्षेत्र कोडको साथ संख्या हुनेछ जुन मस्कोमा लागू हुनेछ। स्पष्ट रूपमा, अन्य कोडहरू पहिले नै अक्षरहरू र संख्याहरूको संयोजनले ओतप्रोत भइसकेका छन, जसले नयाँ कोड बनाउँदछ :-)) ट्राफिक जामसँग लड्न यो उत्तम हुन्छ, किनकि त्यहाँ अधिक र त्यहाँ धेरै are
सामान्यतया चलचित्रहरू र कारहरूमा शृ .्खलाहरूमा काल्पनिक नम्बरहरू हुन्छन् (कुनै पनि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन) फिल्म निर्माताहरूका लागि संख्याहरू केवल सहारा, अस्तित्वहीन डाटा हुन्। त्यसोभए तपाईंले फिल्म र टिभी कार्यक्रमहरूमा कार नम्बरहरू हेर्नु हुँदैन। यसबाहेक, श्रृंखला उद्धरण; मेजरकोट; कीवमा फिल्म गरिएको, र श्रृंखला को कार्य कुनै विशेष शहर मा प्लाट अनुसार देखा पर्दैन (शहर को नाम कहिल्यै गरिएको छैन)।
२०१२ देखि मास्को र मस्को क्षेत्रले 2012 777 को श्रृंखला जारी गर्ने मौका छोड्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। तसर्थ, तिनीहरूले कथित रूपमा २277 को नयाँ श्रृंखला प्रस्तुत गर्नेछन्। यो यति लामो समयको लागि भनिएको छ कि तिनीहरू सायद पहिले नै लाइनमा आइसकेका छन् जब २277 श्रृंखला सडकमा छोडेको छ।
र यो सम्पूर्ण चाल हो! नम्बर फिल्मको लागि विशेष आविष्कार गरिएको थियो। ठीक त्यस्तै, एक प्रदर्शन को लागी। के तपाई त्यस्तो संख्या चाहानुहुन्छ? 🙂 व्यक्तिगत रूपमा, म निश्चित रूपमा अस्वीकार गर्दिन। सायद निकट भविष्यमा क्षेत्र नम्बर २ 277 लाई प्रस्तुत गरिनेछ - तर यो अफवाह बाहेक अरू केहि छैन।
यो संख्या कुनै पनि क्षेत्रमा अवस्थित छैन। चलचित्रहरूमा कारहरूमा सँधै काल्पनिक नम्बरहरू हुन्छन्, र यहाँ बाहेक, उनीहरूले दर्शकलाई षड्यन्त्र गर्न विशेष गरी एउटा अज्ञात संख्या चयन गरे। कीवमा शृ .्खलाको शुटि aboutको बारेमा के थाहा छ भन्ने बावजुद, मानिसहरु यस श्रृंखलामा नै शहरको अर्थ के हो भन्नेमा रुचि राख्छन्।
२277 क्षेत्र नयाँ श्रृंखलाको लागि आविष्कार होईन। अर्को दिन अखबारको उद्धरणमा; मस्को कोम्सोमोलिट्सकोट; एक लेखमा देखा पर्‍यो जुन आउँदो वर्षहरूमा मस्को क्षेत्रका लागि २ नयाँ क्षेत्र ल्याइनेछ: २2र २ 277।।
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,542 प्रश्नहरू।